Munaasabad lagu xusayay sanad-guuradii 43-aad ee kasoo wareegatay xilligii la aas aasay? ciidanka alsuubta Somaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta taliska ciidanka Asluubta Puntland ee Garowe
Waxaa munaasabadaaasi? ka qayb galay madaxwayne ku xigeenka Puntland Gen. C/Samad Cali Shirre, Taliye ciidanka asluubta Puntland Sareeyo guuto Cali Nuur Cumar , Wasiiro iyo wakiilo? ka socday Hay'addaha UNPD iyo UNODC.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen C/Samad Cali Shirre oo qudbad ka jeediyay? munaasabada ayaa amaanay ?ciidanka Asluubta Puntland isagoo sheegay in kor loo qaadayo adeegyada ciidamada Asluubta si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo.
Taliyaha ciidanka Asluubta Puntland Saareeya Guuto Cali Nuur Cumaar ayaa isna ka hadlay xuska munaasabadaan (43) guurada ka soo wareegatay Aasaaskii ciidamada Asluubta Soomaaliya waxaana uu hambaliyo u diray ciidamada Asluubta Soomaaliya.